Dawlada Soomaaliya oo ka digtey roobab mahiigaana dalkoo dhan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dawlada Soomaaliya oo ka digtey roobab mahiigaana dalkoo dhan
Wasaarada arimaha gargaarka ee dawlada dhexe ayaa ka digtey roobab mahiigaana oo dalka ku keena daadad farabadan qaasatan magaalooyinka teedsan webiyada sida gobolada Hirshabeele, Gedo. Waxa sidoo kale laga digey gobolada Woqooyiga sida Awdal, Sool, Sanaag iyo kuwo kale in waxyeelo soo gaaro.
Wasaarada ayaa ku baaqaysa in laga fogaado dooxyada. Roobabkan ka curanaya dalka ayaa horeba khasaare ugu gaystey magaalooyinka Qardho iyo Baardheere. Waxa jirtey cabasho ah in si isku mida loogu gurman degmooyinka.
Dad aad u farabadan ayaa ku khasaaray daadadka ayagoo uu qaaday saracii ay beerteen ee u soo gu’i lahaa bishan aan ku jirno.
Soomaaliya oo dhan ayaa sanadahan dambe heshay nimcadii RABI oo aad loogu diirsaday. Waxa dalkoo dhan ka da’ay roobab ka badan inta ay caadiyan helaan gu’ga. Waxa la yiraa nimco kasta nusqaanteeda leh.